६ बलिउड जोडीको विवादस्पद विवाह! :: विद्या राजपुत :: Setopati
६ बलिउड जोडीको विवादस्पद विवाह!
बलिउडमा धेरै जोडीहरु छन्, जसलाई देखेर थुप्रै जोडिहरुको ‘कपल गोल’ बनाउँछन्। बलिउड फिल्म उद्योगमा रहेर लामो समयसम्म आफ्नो जोडी टिकाईराख्नु साँच्चै नै ठूलो कुरा हो। बलिउड अभिनेता शाहरुख खान र गौरीको विवाह गरेको नै २६ वर्ष भइसकेको छ। गौरीसगँ विवाह गर्न शाहरुखले पनि अनेकन प्रयास गर्नुपरेको थियो र अन्त्यमा उनीहरुको प्रेमले सफलता हासिल गर्यो।
बलिउड उद्योगमा यस्ता केही जोडीहरु छन् जसको विवाह सधैं एउटा आकर्षणको विषय बनेको छ। कहिले बिवाहको बिचमा कोहि तेस्रो व्यक्ति आइदिन्छन् त कहिले विवाह भएपश्चात उनीहरुको मन अरु कसैमा गएर रोकिन्छ।
बोनी कपूर र श्रीदेवी
बोनी कपूरको फिल्म 'मिस्टर इडिंया'को क्रममा श्रीदेवीसँग प्रेम बसेको थियो। पहिला श्रीदेवीको प्रेम अभिनेता मिथुन चक्रवतिसँग थियो। बलिउडमा फैलिएको खबर अनुसार श्रीदेवीसँग प्रेममा रहेका मिथुनले बोनी र श्रीदेवीलाई शंका गर्दै राखि बाँध्न लगाएका थिए।
तर पछि विवाहित मिथुनले श्रीदेवीलाई विवाह गर्न नसक्ने बताएपछि बोनीले साथ दिएका थिए। बोनीले मोना कपुरसँग १३ वर्षसम्मको सम्बन्ध तोडेर श्रीदेवीसँग बिवाह गरेका थिए।
श्रीदेवी बोनीसँगको विवाहको क्रममा गर्भवति रहेको कुरा पनि चर्चामा रहेको थियो। बोनीको पहिलो श्रीमतीको छोरा अर्जुन कपुर आज पनि श्रीदेवीसँग राम्रोसँग बोल्दैनन। उनी आफ्नो आमाको दोषी श्रीदेवीलाई मान्छन्।
जया र अमिताभ
जया र अमिताभ बच्चनको सम्बन्ध कुनै नाटकभन्दा कम छैन्। यो जोडिले आफ्नो बैवाहिक जीवनको ४४ वर्ष पुरा गरिसकेका छन्। विवाह भएको केही महिनादेखि नै उनीहरुको विवाहमा तेस्रो व्यक्ति अर्थात रेखा आएकी थिइन्।
उनीहरुको विवाह यस्तो विन्दुमा आइसकेको थियो कि उनीहरुको विवाह टुट्न पनि सक्थ्यिो।
जयासँग विवाह गर्नुअघि देखि नै अमिताभ र रेखाको सम्बन्ध थियो जुन विवाह पछि पनि कामय थियो। बलिउडमा ती दुईको प्रेम सम्बन्ध आगोसरी फैलिएको थियो। दुबैको प्रेमसम्बन्धको बारेमा निर्देशक यश चोपडाले एक अन्तर्वार्तामा खुलासा गरेका थिए। यसबाट जया पनि निकै पिडित थिइन्। जयाले आफ्नो विवाह बचाउन निकै मिहेनत गर्नुपरेको थियो।
नितू कपूर र ऋषि कपुर
ऋषि कपुर र नितू कपूरको छोरा रणवीर कपुर अहिले बलिउडमा राज गरिरहेका छन्। ऋषि कपुर र नितू कपूरले आफ्नो पहिलो फिल्मबाट एक अर्कालाई मन पराएर डेट गर्न थालेका थिए। उनीहरुले सार्वजनिक रुपमा आफ्नो प्रेम बताएका थिए। केही फिल्म सँगै गरेपछि उनीहरुको विवाह पनि भयो। तर विवाह पछि ऋषिले नितूलाई फिल्म खेल्न दिएनन्। ऋषि रक्सीको लतमा नराम्ररी फसेका थिए। यसबाट हैरान भएकी नितूले आफ्नो श्रीमान् ऋषि विरुद्द प्रहरीकोमा उजुरी पनि दिएकी थिइन्। यस खबरले बलिउड निकै तातेको थियो।
सुनिल दत्त र नरगिस
सुनिल दत्त र नरगिसको प्रेम कहानी बलिउडमा निकै प्रख्यात छ। उनीहरुको प्रेम कथा कुनै नाटक भन्दा कम छैन।
नरगिस सुनिल भन्दा केही वर्ष जेठी थिइन्। सुनिल फिल्ममा हिट हुनु अगाडी नै नरगिस हिट अभिनेत्री थिइन्। एक दिन यी दुई सँगै फिल्म 'मदर इन्डिया'को शुटिङको क्रममा नरगिस बसेको ठाउँमा आगो लाग्यो। शेटमै आगो लागेपछि नरगिस भित्र रहेको थाहा पाएपछि सुनिलले आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर नरगिसलाई आगोबाट बचाए।
यस घटनापछि उनहिरुको प्रेम मौलाएको थियो। त्यसपछि उनीहरुको विवाह भयो। बलिउडका ठुलो सेलिब्रटीको अन्तर्जातिय विवाहले बलिउड निकै तातेको थियो।
अमृता सिंह र सैफ अलि खान
अभिनेत्री अमृता सिंह सैफ अलि खान भन्दा १३ वर्षले जेठी थिइन्। र उनीहरुको धर्म पनि फरक थियो।
तर पनि उनीहरुले सन् १९९१ मा विवाह गरे। उनीहरुको यो विवाह निकै विवादास्पद बन्यो। तर सन् २००४ मा अमृता सैफको डिभोर्स भयो।
धर्मेन्द्र र हेमा मालिनी
हेमा मालिनी बलिउडमा ड्रिम गर्लको रुपमा परिचित छिन्। धर्मेन्द्र पनि सुपरहिट थिए। यी दुई बीचको प्रेमले बलिउड नै हल्लिएको थियो। धर्मेन्द्र विवाहित र दुई छोराको बुवा थिए। तर हेमा मालिनीसँग विवाह गर्न निकै आतुर पनि। धर्मेन्द्रको श्रीमतीले उनलाई छाड्न मानेकी थिइनन्। तर पनि डिर्भोस लिएर हेमासँग विवाह गर्न धर्मेन्द्रले आफ्नो धर्म नै परिवर्तन गरेका थिए। आज पनि उनका छोरा सनि र बबि हेमा मालिनी र उनको छोरीहरुसँग राम्रोसँग बोल्न रुचाउँदैनन्।
जन्मदिनमा ‘कौन बनेगा करोडपति’को शेटमै राेए अमिताभ बच्चन(हेर्नुस् भिडियो)
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज २७, २०७४, ०६:१६:४२